Omama bavezwa kuMonsanto Weed Killer Kusho Imiphumela Emibi Yezingane - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Omama bavezwa kuMonsanto Weed Killer Kusho Imiphumela Emibi Yezingane
Posted on April 5, 2017 by UCarey Gillam
Ukukhathazeka ngomuthi wokubulala ukhula osetshenziswa kakhulu emhlabeni sekuqala ukuguquka okusha njengoba abacwaningi bembula imininingwane ekhombisa ukusetshenziswa kabanzi kombulali wokhula weMonsanto Co. kungaxhunyaniswa nezinkinga zokukhulelwa.
Abaphenyi babheka ukutholakala kwe-herbicide eyaziwa njenge-glyphosate, okuyisithako esiyinhloko kumuthi wokubulala ukhula obhalwe uphawu iMonsanto's Roundup, bathe bahlole futhi balandela omama abakhulelwe abangama-69 bathola nokuthi ukutholakala kwamazinga e-glyphosate oketshezini lwabo lomzimba kuhambisana nemiphumela yokuzalwa engemihle. Ucwaningo lusezigabeni zokuqala kanti nosayizi wesampula mncane, kepha u-tyena iqembu kuhlelelwe uku bethule abakutholile ngoLwesine engqungqutheleni ebibekwe yi-Children's Environmental Health Network (CEHN) eWashington, DC
"Lolu wudaba olukhulu," kusho uPaul Winchester, umqondisi wezokwelapha ophikweni lweziguli ezibelethayo eFranciscan St. Francis Health system kanye noprofesa wezifo zezingane zokwelashwa eRiley Hospital for Children e-Indianapolis, e-Indiana. Uthe lesi yisifundo sokuqala e-US ukukhombisa ukuthi i-glyphosate ikhona kwabesifazane abakhulelwe. "Wonke umuntu kufanele akhathazeke ngalokhu."
IGlyphosate umuthi wokubulala izinambuzane othandwayo, osetshenziswa kakhulu emisebenzini yokulima emhlabeni jikelele. Kuvame ukufuthwa ngqo ezitshalweni eziningi zokudla nalezo ezisetshenziselwa ukondliwa kwemfuyo. Kepha sekuyimpikiswano eshubile eminyakeni embalwa edlule ngenxa yocwaningo oluxhumanisa umuthi wokubulala ukhula nezinhlobo zomdlavuza nezinye izifo. IMonsanto imangalelwa ngamakhulu abantu abathi bona noma abathandekayo babo bathuthukisa i-non-Hodgkin lymphoma ngenxa yokuchayeka ku-Roundup-based Roundup. IMonsanto, i-EPA nezinye izinhlaka ezilawulayo, zithi ubufakazi be-carcinogenicity buyashoda futhi ikhemikhali lingelinye lezibulala-zinambuzane eziphephe kunazo zonke ezisetshenziselwa ukukhiqizwa kokudla. Kepha imibhalo etholakele enkambweni yamacala kukhombisa ukuthi inkampani kungenzeka baye basebenzisa ucwaningo lwesayensi ukufihla ubufakazi bokulimala.
Ithimba elethule umbiko walo ngoLwesithathu lifake ososayensi asebenesikhathi eside bengabaza imikhiqizo kaMonsanto kanye nabaphenyi bezokwelapha abaye baba nokukhathazeka nge-glyphosate namanye ama-pesticides ngokufunda kwabo ngezinkinga zezempilo zezingane.
UWinchester, obehola ucwaningo lwesampula yomchamo, uthe ukubheka kwakhe i-glyphosate nabesifazane abakhulelwe kusezigabeni zokuqala kakhulu kanti yena nabacwaningi asebenza nabo banethemba lokwethula iphrojekthi enkulu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi kulo nyaka. Umsebenzi wokuqala uthole i-glyphosate emchameni wabesifazane abakhulelwe abangama-63 kwabangama-69 (91%) abathola ukunakekelwa ngaphambi kokubeletha ngomkhuba wokubeletha wase-Indiana. Abaphenyi baqoqa idatha ngaphezu kweminyaka emibili, kusukela ngo-2015-2016, futhi bathola ukuthi amazinga aphezulu e-glyphosate kwabesifazane ahambisana nokukhulelwa okufushane kakhulu kanye nezisindo zokuzalwa eziphansi ezilungisiwe.
Ukuhlangana akufakazeli ukuthi kuyimbangela. Noma kunjalo, okutholakele kuyakhathaza ngoba izisindo zokuzalwa eziphansi kanye nokukhulelwa okufushane kubhekwa njengezinto eziyingozi ezinkingeni eziningi zezempilo kanye / noma ze-neurodevelopmental phakathi nempilo yomuntu. Izingane ezinesisindo esiphansi sokuzalwa maningi amathuba okuba nesifo sikashukela, isifo senhliziyo, umfutho wegazi ophakeme, nokukhuluphala, ucwaningo lukhombisa.
Abantu bangavezwa ku-glyphosate ngokudla nangokuhlangana nemisebenzi yokulima efafaza i-glyphosate emasimini wokukhiqiza ummbila namasoya. Kokubili isoya nommbila, kanye nezinye izitshalo ezimbalwa, kwenziwe izakhi zofuzo ukubekezelela ukusetshenziswa okuqondile kwe-glyphosate. Abalimi bavame ukusebenzisa i-glyphosate ngqo kukolweni, i-oats nezinye izitshalo ezingezona ezofuzo ngaphambi nje kokuvuna, okuholela ezinsaleleni zemikhiqizo yokudla okususelwa ezinhlamvini.
Ukusetshenziswa kweGlyphosate kukhuphuke kakhulu kule minyaka engamashumi amabili edlule ngokukhula kwezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo kanye nokuhluma kokusakazeka kokhula olungazwani ne-glyphosate. UDkt Charles Benbrook, ongomunye wabethuli abahleliwe engqungqutheleni ye-CEHN, wenza amaphrojekthi okuthi ngonyaka we-2020, "amahektare amaningi ezindawo zokulima eMidwest azobamba ukhula olunamandla amathathu noma ngaphezulu ukumelana ne-glyphosate kunelilodwa noma elilodwa." Abalimi bebelokhu bezama ukulwa nokhula olungazweli nge-glyphosate eyengeziwe namanye amakhemikhali. Izitshalo ezintsha ezenzelwe ukubekezelela i-2,4-D kanye ne-dicamba herbicides exutshwe ne-glyphosate seziyakhishwa manje. Imininingwane yemboni ikhombisa ukuthi ukusetshenziswa kwe-herbicide kulindeleke ukuthi qhubeka nokukhuphuka, okwenza kube nzima kakhulu kososayensi kanye nodokotela ukuthola isibambo emazingeni okuchayeka kanye nemithelela empilweni yokuzala, iqembu lathi esethulweni sabo.
IWinchester ibilokhu yenza ucwaningo ngokuchayeka kwezibulala-zinambuzane nemithelela kwabesifazane abakhulelwe iminyaka eminingi, kufaka phakathi umsebenzi ojulile we-atrazine, omunye umuthi wokubulala ukhula othandwa kakhulu ngabalimi. Uthe uyamangala ukubona amaphesenti aphezulu kangaka abesifazane ehlolwa ekhombisa i-glyphosate emchameni wabo. Uthe ucwaningo oluningi ngemithelela ye-glyphosate luyadingeka, futhi kudingeka imininingwane eminingi emazingeni okuchayeka ngokudla. Wayemgxeka kakhulu uhulumeni wase-US, ojwayele ukweqa ukuhlola izinsalela ze-glyphosate ekudleni yize ama-ejensi alawulayo evivinya izinkulungwane zemikhiqizo yokudla unyaka ngamunye ngezinsalela zezinye izinhlobo zemithi yokubulala izinambuzane, kufaka phakathi i-atrazine.
Yena nabanye abacwaningi bacela iZikhungo Zokulawulwa Kwezifo ukuthi zifake i-glyphosate ne-metabolite yayo eyinhloko, i-aminomethylphosphonic acid (AMPA) ku umsebenzi we-biomonitoring lenza ukulandelela amazinga wezibulala-zinambuzane namanye amakhemikhali emchameni nasegazini.
“Ngabe leli zinga lokuchayeka liphephile noma cha? Sitsheliwe ukuthi kunjalo, kepha ukuvezwa akukalinganiswanga, ”kusho uWinchester. Kuyaxaka. ”
(Kuqale kuthunyelwe ku- I-Huffington Post)
Ukudla Okucatshangwayo, Izifo Ezihlobene Nokudla, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane, Ukukhangisa ezolimo, EPA, ukulima, Ukudla, glyphosate, i-herbicide, Monsanto, ukukhulelwa, RoundUp